BQ Aquaris X ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ | Androidsis
ယခုအချိန်တွင်လူတိုင်း၏ဒီဇိုင်း၊ နည်းပညာနှင့်ထူးခြားသောစျေးနှုန်းများအတွက်လူတိုင်း၏နှုတ်ခမ်းပေါ်ရှိ terminal ကိုသင်ကြားသိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီဆိပ်ကမ်းဟာအခြားတစ်ခုမဟုတ်ပါ BQ Aquaris Xယနေ့ကြောင်း terminal ကို ကျနော်တို့နက်ရှိုင်းစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Androidsis, BQ Aquaris X ကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် Android အနေဖြင့်ဆယ်ရက်ထက်ပိုပြီးအသုံးပြုရန်အတွက် ၁၀ ရက်ထက်နည်းသောကာလကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ ဤစာမူမှတစ်ဆင့်သင့်အားကျွန်ုပ်၏စိတ်ရင်းမှန်ဆုံးထင်မြင်ချက်များပေးရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ပြည့်စုံ နက်ရှိုင်းသော BQ Aquaris X ၏ဗွီဒီယိုသုံးသပ်ချက် ငါဒီ post ထဲမှာပူးတွဲပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးအလျင်အမြန်မဟုတ်သောဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် BQ Aquaris X ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးအချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြပြီးသင်ဤ BQ ဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဆိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့စိစစ်ပြီးဖြစ်သောဤပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုအသေးစိတ်ကိုလက်လွတ်မခံရန်သင့်အားအကြံပေးသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် BQ Aquaris X ၏နက်နဲရာကိုရောက်ရှိသည်.
1 BQ Aquaris X ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
2 BQ Aquaris X ၏အကောင်းဆုံး
2.2 စိတ်ကြိုက်အလွှာမရှိပဲ Android Nougat 7.1.1
2.3 IPS မျက်နှာပြင် Quantum အရောင် + နည်းပညာ
2.5 ၆ နာရီကျော်တက်ကြွစွာမြင်ကွင်းရှိသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသောထူးခြားသောဘက်ထရီ
3 အဆိုးဆုံး BQ Aquaris X
5 BQ Aquaris X နှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံနမူနာများ
BQ Aquaris X ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ Aquarius X
operating system အန်းဒရွိုက် Nougat 7.1.1
ဖန်သားပြင် ၅.၂ လက်မအရွယ် IPS LCD LTPS FullHD နှင့် Quantum Color + နည်းပညာ - 5.2D နည်းပညာ - ၄၂၃ dpi နှင့် Dinorex ဖန်ခွက်
Processor ကို 626 Ghz တွင် Qualcomm Snapdrogon 2.2 Octa Core
GPU ကို 506 Mhz မှ Adreno 650
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 32GB နှင့် MicroSd အထောက်အပံ့သည် 256GB အထိအများဆုံးစွမ်းရည်ရှိသည်
နောက်ကင်မရာ 298 MP အာရုံခံကိရိယာƒ / 16 2.0 µm / pixel aperture ပါ ၀ င်သော Sony IMX1.12 - Largan မှန်ဘီလူး ၆ ခု - Dual Tone Flash - အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း autofocus (PDAF) - 6K @ 4fps ဗီဒီယို resolution - ဗီဒီယိုတည်ငြိမ်မှု (Vidhance) - Slow Motion (30p @ 720fps) - Fast Motion နှင့် Time Lapse - Auto HDR - RAW ပုံစံဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း - လက်စွဲစာအုပ် parameter ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း - မြင်ကွင်းကျယ်နှင့်ကွဲကွဲပြားပြားပေါက်ကွဲခြင်းညများ
ရှေ့ကင်မရာ Samsung S5K4H8YX 8 MP ƒ / 2.0 ၁.၁၂ µm / pixel aperture နှင့်မှန်ဘီလူး ၃ ခု - ရှေ့မီး - 1.12p @ 3fps Video resolution - Face Beauty - Selfie Indicator
ဆက်သွယ်မှု Dual Nano SIM သို့မဟုတ် Nano Sim + MicroSD - 4G (LTE) FDD (800/1800/2100/2600) (B20 / B3 / B1 / B7) - 3G HSPA + (850/900/1900/2100) (B5 / B8 / B2 / B1) - 2G GSM (850/900/1800/1900) - GPS + GLONASS + GALILEO - Wi-Fi® 802.11b / g / n / ac (dual band - 2.4 GHz /5GHz) - Bluetooth 4.2 - NFC
အခြားအင်္ဂါရပ်များ သတ္တုအချောထည်များပါ ၀ င်သောဒီဇိုင်း - terminal ၏နောက်ဘက်ရှိလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာ - Smart PA စပီကာ - Bluetooth အတွက် aptX ™နည်းပညာ - ၂ မိုက်ခရိုဖုန်း (ဆူညံသောကင်ဆာ) - FM ရေဒီယို - USB Type-C ကြိုး
ဘက်ထရီ မဖြုတ်နိုင်သော 3100 mAh
ရှုထောင့် 146.5 72.7 7.9 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 153 ဂရမ်
စြေး ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် 279.90
BQ Aquaris X ၏အကောင်းဆုံး
ငါ့နောက်သို့လိုက်သောသူများသည်ကျွန်ုပ်သည် Android ဆိပ်ကမ်းများမှကျွန်ုပ်တို့ကိုအထူးသဖြင့်သင့်အတွက်ဒီနေရာတွင်ဆန်းစစ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ထင်မြင်ချက်ပေးရန်ကျွန်ုပ်အားကမ်းလှမ်းသောကောင်းမွန်သောအရာများမှအစပြုသည်ကိုအစဉ်အမြဲစတင်ကြောင်းသိပြီးဖြစ်သည်။ အရင်ကငါနဲ့မတူဖူးဘူး၊ ဒီကနေ့ဒီအပိုင်းဟာတစ်ခုတည်းသောအပိုင်းဒါမှမဟုတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်တယ် ဒီ BQ Aquaris X ကို၏သုံးသပ်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဒီလိုအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ terminal - ကောင်းမွန်တဲ့အရည်အသွေး - စျေးနှုန်းအချိုးအစားရှိတာကိုပြောရဲ့ ထုတ်လုပ်သူအနည်းငယ်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းတို့အကြားဤဆက်နွယ်မှုကိုအနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးကျယ်သောနံရံ၏နိုင်ငံမှတင်သွင်းသောဆိပ်ကမ်းများအသုံးမပြုပါက
ငါ့ကိုဒီအကြောင်းကိုအံအားသင့်ဆုံးဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခု BQ Aquaris X X ၏ကြီးမားသောအနက်ရောင်အကွက်မှ၎င်း၏ရှေ့တွင်မှတ်သားထားသည့်အနက်ရောင်အကွက်မှထုတ်ယူသည်နှင့်သတိပြုမိသည်။ က သတ္တုကိုယ်ထည်နှင့်အတူ unibody terminal ကို အမှန်တရားကသင့်ကိုအလွန်တော်ပါတယ်၊ နောက်ဖက်ကိုပလပ်စတစ်ပိုလီကာဗွန်နိတ်တစ်မျိုးနဲ့လုပ်ထားပေမယ့်သူကသတ္တုနဲ့ဆင်တူတဲ့အထူးထိတွေ့မှုကိုပေးတာကြောင့်ပလတ်စတစ်လို့ခန့်မှန်းရတာတောင်မှခက်ခဲပါတယ်။
စိတ်ကြိုက်အလွှာမရှိပဲ Android Nougat 7.1.1
ဤ BQ Aquaris X ရှိသည့် Android ဗားရှင်းအတွက်အမှန်တရားမှာသင်သည် ထိုအချိန်မှစ၍ ပိုမို၍ မတောင်းခံနိုင်ပါ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 7.1.1 Nougat ဗားရှင်းနှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်သည် ပံ့ပိုးမှုအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အပ်နှံထားသောကင်မရာအက်ပ် များမှလွဲ၍ မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ် add-ons မှမရှိ။
IPS မျက်နှာပြင် Quantum အရောင် + နည်းပညာ
၎င်းကိုပြုလုပ်သည့် Quantun Color + နည်းပညာဖြင့်မျက်နှာပြင် ငါဒီစျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းရှိ terminal တွင်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြသောအကောင်းဆုံး IPS LCD panel များထဲကတစ်ခု.
ဒါဟာရှိပါတယ် အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်သပ္ပါယ်တောက်ပမှု, လိုအပ်သောအခြေအနေများတွင်အရောင်တောက်ပစေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အပြင်ညဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုအန္တရာယ်ရှိသောအပြာရောင်အလင်းရောင်မှကာကွယ်ရန်ညဘက်ဖန်သားပြင်တစ်ခုပါရှိသည်။
အကယ်၍ ဒီဟာမလုံလောက်ရင်၊ ငါတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်ဗွေ anti-treatment ထက်နည်း 300 ယူရိုတစ်ခု Android terminal ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။
ဒီ BQ Aquaris X ၏ကင်မရာများသည်ဤ Android terminal ၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့သောကင်မရာများသည်terminal ၏နောက်ဘက်အတွက် Sony မှထုတ်လုပ်သည် နှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Samsung ရဲ့ရှေ့မျက်နှာစာ.
အနောက်ကင်မရာကစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် 4k အရည်အသွေးရှိတဲ့ဗီဒီယိုကို 60 or 30 fps နဲ့ရိုက်ကူးပါ ဗွီဒီယိုကိုနှေးနှေးဖြင့်အသံဖြင့်ဖမ်းယူရန် Slow Motion လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပြင်အပြင်ရှေ့ကင်မရာက FullHD အရည်အသွေးဖြင့်ဗီဒီယိုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။
ရှေ့ကင်မရာနှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကိုဆန့်ကျင်။ ကောင်းသည့်အချက်မှာလိုချင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် အလင်းနည်းသောအခြေအနေများတွင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရိုက်ကူးပါ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျနော်တို့ built-in flash ကိုသုံးရင်တောင်သူတို့ဆူညံသံတွေအများကြီးထွက်လာတာကြောင့်သူတို့လိုချင်တာတွေအများကြီးကျန်နေပြီ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤ BQ Aquaris X ၏ခိုင်မာသောအချက်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 7.1.1 ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသည်ဤ terminal ၏ဘက်ထရီနှင့် တွဲဖက်၍ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုအားမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ 3100 mAh ရှိသောဘက်ထရီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ဒီတစ်ခုကငါ့ကိုပေးနေတယ် မျက်နှာပြင်၏ခြောက်လနှင့်တစ်နှစ်ခွဲ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဆက်သွယ်မှုအားလုံးနှင့်အချိန်တိုင်းချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံးတွင်အရောင်ကိုအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၎င်း၏အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် လိုအပ်လျှင်ရုံ ၁ နာရီနှင့်လေးပုံတစ်ပုံအတွင်း terminal ကိုအားသွင်းပါ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15% ဘက်ထရီဖြစ်ခြင်း။
IPS Quantun အရောင် + မျက်နှာပြင်
အဆိုးဆုံး BQ Aquaris X
ယေဘူယျအားဖြင့် Android terminal မှမကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ရှာဖွေသည့်အခါတိုင်း BQ Aquaris X သည်ကျွန်ုပ်၏နှိမ့်ချသောအမြင်တွင်၎င်းကိုရှာတွေ့ခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောမကောင်းသောအရာအားဖြင့်၎င်းကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ အစနှင့်မကြာမီငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ terminal ကိုဖွင့်အဖြစ်။ ၎င်းသည်လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိသောအဓိပ္ပာယ်မရှိသော်လည်း BQ ၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်ထူးခြားသောအမှတ်တံဆိပ်များရှိခလုတ်များရှိသည်ဆိုသော်လည်း၎င်းတို့သည် terminal ကိုအလွန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ \_ t ကျွန်တော့်အတွက်တော့ခလုတ်များပါ ၀ င်သည့်ပြောင်းပြန်အစဉ်အတိုင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်နှင့်တကယ့်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်.
ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်၏မူလညာဘက်ရှိ back ခလုတ်အနေအထားနှင့်လက်ဝဲဘက်ရှိမကြာသေးမီကအလုပ်များခလုတ်များရှိလေ့ရှိသည်၊ ဤ BQ Aquaris X တွင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အား Android မှပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ညှိနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း ချိန်ညှိချက်များ။
BQ Aquaris X နှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံနမူနာများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » BQ Aquaris X ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Cesar Gonzalez Gayol ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဟုတ်ကဲ့ဆရာ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်အကျဉ်းချုပ်။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရနောက်ကျောခလုတ်သည်ညာဘက်တွင်ရှိသည်ဟုညည်းညူခြင်းသည်အခြားစက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုကြောင့်သာဖြစ်နိုင်သည်၊ ယုတ္တိဗေဒကကျွန်ုပ်တို့ပြန်လှည့်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ left, ထို့ကြောင့်အိမ်၏ဘယ်ဘက်ရှိ back ခလုတ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်မှန်ကန်ပုံရသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သင် X ကိုကြိုက်ခဲ့လျှင် Xpro ကိုသုံးပါ။
Cesar Gonzalez Gayol အားပြန်ကြားပါ
အော်စကာ Martinez ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်သောတင်ပြချက် BQ Aquaris X မှ Francisco Ruiz၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအဖွဲ့မှအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးကျွန်တော်ဝယ်ယူမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
Oscar Martinez အားပြန်ကြားပါ
pro ရဲ့ကင်မရာက LG g4 ထက်ပိုကောင်းမလားပြောပြပေးပါ ဦး ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
LG G4 ထက် bq x5 plus ကဲ့သို့ပင် g4 ထက်ပိုမိုဆိုးရွားသွားလျှင်မည်သို့ပိုကောင်းမည်နည်း။
optical stabilizer၊ laser focus နှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့် focal length နှင့်သေးငယ်သည့် pixel များမပါရှိပါ။
LG G4 ကင်မရာကအများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။
Vicente forvic အားပြန်ပြောပါ
ငါသိသကဲ့သို့ငါ BQ Aquaris M5.5 နှင့်အတူတူသိသကဲ့သို့ငါကဝယ်ယူကတည်းကအာရုံစူးစိုက်မထားဘူးသောကင်မရာနှင့်အတူပြproblemsနာများနှင့်သူတို့လိုချင်သောအခါအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ပါဝါခလုတ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
Jose carlos benito အားပြန်ကြားပါ
Francisco ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဒီပစ္စည်းတွေကိုကိုလံဘီယာမှာတရားဝင်ရောင်းချခြင်းမရှိသေးတာကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီအမျိုးအစားကိုပိုပြီးဆန်းစစ်လေ့လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Francisco ရဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုလံဘီယာမှာတရားဝင်ရောင်းချခြင်းမရှိတာကအလွန်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းပါတယ်။ ပုံကောင်းကောင်းကိုးကားထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအမျိုးအစားကိုပိုပြီးဆန်းစစ်လေ့လာဖို့ဂရုပြုနေတုန်းပဲ။
အန်တိုနီယို Salatino ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Francisco က
ငါ BQ ဆဲလ်ဖုန်းအကြောင်းသိချင်တယ်၊ ငါအရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်၊ ဆမ်ဆောင်းလိုင်းမှာဆိုပါစို့၊ သူတို့ကဘယ်ဥပမာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မလဲ။ ပိုကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုရှိဖို့ဆိုရင်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ငါအကြိမ်ရေဆိုတာဘာလဲ၊ ငါတိုင်းပြည်မှာသုံးလို့ရမလားဆိုတာငါသိဖို့လိုတယ်။
Antonio Salatino အားပြန်ပြောပါ
Android Nougat ကိုဥရောပရှိ Galaxy A3 2016 အတွက်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ